फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सामाजिक न्यायको नारामा भएको थियो । - Pradhanta
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सामाजिक न्यायको नारामा भएको थियो ।
Pradhanata News — २ हप्ता अगाडि add comment
काठमाडौं, चैत्र २५ गते ।
फ्रान्सको राज्यक्रान्ति सन् १७८९ मा भएको थियो । उक्त क्रान्ति समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सामाजिक न्यायको नारा दिएर भएको थियो । त्यहाँका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरुको विद्रोहका कारण सो क्रान्ति भएको थियो । उक्त क्रान्तिमा प्रजातन्त्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ, वैचारिक स्वतन्त्रताका पक्षधर, दार्शनिक र सर्वसाधारणको पनि त्यत्तिकै सक्रियता रहेको थियो । यस क्रान्तिमा बौद्धिक वर्गको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । मन्टेस्क्यु, रुसो र भोल्टेयर जस्ता विद्धानहरुले महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उक्त क्रान्ति हुनुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, बैदेशिक र तात्कालिक अन्य कारणहरु रहेका थिए । सन् १७९९मा नेपोलियनको उदयसँगै सो क्रान्तिका उपलब्धीहरु समाप्त भएका थिए । निरंकुश राजतन्त्र, राजदरबारको बिलासी जीवन, शासनमा केन्द्रीकरण, नागरिक स्वतन्त्रताको अभाव, असमान कानुनी व्यवस्था, शासनमा रानीको हस्तक्षेप क्रान्तिको कारण बनेका थिए । त्यसैगरी पादरीको हेपाहा प्रवृत्ति, कुलीन वर्गको अत्याचार, मध्यम तथा बौद्धिक वर्गको असन्तोष, निम्न वर्गको असन्तोष पनि क्रान्तिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कारण बनेका थिए ।
उक्त क्रान्तिका कारण सामन्तवादको अन्त्य भयो । प्रजातन्त्रको विकास भयो । मानवअधिकारको घोषणा भयो । फ्रान्सेली जनतामा राष्ट्रिय भावनाको विकास भयो । सामाजिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन भयो । कानुनी राज्यको स्थापना भयो । आर्थिक विकास भयो । फ्रान्सको स्टेट जनरल तीन सदनात्मक थियो । पहिलो सदनमा पादरी वर्गका ३०८ जना थिए । दोस्रो सदनमा कुलीन वर्गका २८५ जना थिए । तेस्रो सदनमा ६२१ जना जनप्रतिनिधि थिए । तेस्रो सदनका जनप्रतिनिधिहरु पादरी र कुलीन वर्ग विरुद्ध थिए । जसले क्रान्तिलाई सफल बनाउन योगदान गरेको थियो ।
बङ्गलादेशका प्रथम राष्ट्रपति सइद नजरुल इस्लाम हुन भने प्रथम प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमान हुन् ।
भारतमा एकैदिन १ लाख ६१ हजार जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि ।
अठारौँ शताब्दीको मध्येदेखि उन्नाइसौँँ शताब्दीको मध्यसम्म बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो ।
सन् १९३९ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बन्नु अघि विन्स्टन चर्चिल बेलायती नौसेना मन्त्रालयका मन्त्री थिए ।
मुन्धुमको शाब्दिक अर्थ राई भाषाको मना (मानव) र दुम (कुरा) शब्द मिलेर बनेको पाइन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
‘द भेनेसियन मकाउ–रिसोर्ट-होटल’ मा ३० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी कामदार छन् ।
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नेपाली साहित्यमा योगदान ।
सशस्त्र प्रहरीको बर्दिबासमा रिजर्भ गण स्थापना ।
राष्ट्रपति समक्ष चार संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पेश ।
जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा आफूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ ।
नेपालको भूगोल, भूकम्पीय जोखिम र बाढीपहिरो ।
राजनीतिक प्रतिशोध र पिस्कर काण्ड ।
दर्ता नं. : ५७४ / ०७४-७५
संचालक : प्रधानता मिडिया प्रा. लि.
का.म.पा.-२८, बागबजार, काठमाडौँ
फोन नं. : ०१-४१६७५३०
सम्पादक : परिवर्तन भट्टराई (कृति)
मो नं. : ९८४११५९३८७
ईमेल : paribartanko@gmail.com
सह-सम्पादक : भूपराज कटुवाल (संघर्ष)
समाचार : कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ
दृष्टिकोण/राजनीति : कृष्णहरि के.सी.
स्वास्थ्य/जीवनशैली : पूर्ण राई
अन्तर्राष्ट्रिय : रोशन मगर
समाज/घटना : सुन्दरहरि विश्वकर्मा
© 2021 Pradhanta